မိမိချစ်ဇနီးက အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်မပါတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရရင်
စိတ်ပါပြီး အပျိုစင်အနေအထားသို့ ရောက်စေပါတယ်
ဒီဆေးက အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်
အသက်၂၅မှ အသက် ၄၀အတွင်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၄၀ကျော်ရင်တော့ထိရောက်မူ့ အားနည်းပါတယ်
ဆေးအမည် GIRL FRIEND မိန်းကလေးဖြန်ဆေး
CB Bank, KBZ Bank ,Wave Moneyတို့ ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်
ငွေကြိုလွဲပြီးပစ္စည်းမှာယူပီးရင် Moblie Banking ရှိတာကြောင့်
ဖုန်း ၀၉၇၆၀၈၃၇၂၆၃ သို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
ရန်ကုန် မန္တလေးသို့ နေ့ချင်းအိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုရှိပြီး
အခြားမြို့များကိုတော့ MGL ရုံးများ ၊ ကားဂိတ်များမှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ
GIRL FRIEND မိန်းကလေးဖြန်ဆေး
Posted by : လက်တွဲဖော်0Comments
https://www.facebook.com/groups/1150014105080954/အမျိုးသား အင်္ဂါအတွက် စိတ်ချယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သုံးစွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ မယုံနိုင်စရာ ရလဒ်တွေအဖြစ် လက်ရှိအချိန်မှာ ဘိုင်အိုမန်းနစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး
ဆေးအမည် = ဘိုင်အိုမန်းနစ်
အမှတ်တံဆိပ် #1ရွှေရောင် ပါရှိပါတယ်
အထူးသန်မာပြီးသုတ်ထိန်းအားပိုမိုကောင်းလာစေသည်နေ့စဉ်သောက်သုံးရန်နှင့်ဆေးပတ်လည်အလုံး၆၀ကုန်အောင်သောက်ဖို့လိုပါသည်သုံးဖူးသူတိုင်း ဆေးကောင်းကြောင်းပြန်ညွှန်းရလောက်အောင် ဆေးစွမ်းထက်ပါတယ်
အမျိုးသားသောက်ဆေးဖြစ်ပြီးလိင်တံနှင့်ကာမခွန်အားကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေသော ဆေးကောင်းဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့ဆေးဝါးထောက်ခံချက်WHO မှထောက်ခံထားပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိပါ။
ရှောင်ရန် - နှလုံးရောဂါနှင့် သွေးပေါင်ချိန် တရာ့ငါးဆယ်နှင့်အထက်ရှိသူများသောက်သုံးရန် မသင့်ပါ။အရက် ဘီယာ ပင်လယ်စာများဖြင့် တွဲဖက်မစားရပါ
(BIOMANIX တံဆိပ် (ဘိုင်အိုမနစ်)
စိတ်သွားတိုင်း လိုက်မစွမ်းနိုင်သော ယောက်ျားကောင်းများအတွက်
MAN POWER အမျိုးသားစွမ်းအားဖြည့်
ဈေးနုန်း ၁၃၀၀၀၀ ၁သိန်း၃သောင်း
Advanced sexual health formula for man
100CC Hope2/maca root 900mg/1000 arginine တို့ပါဝင်ပါတယ်
- တစ်နေ့လျင် တစ်ကြိမ်သောက်သုံး နိုင်ပါသည်။
- မိမိကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်အားရလောက်ချိန်တွင် ဆေးကို ဆက်မသုံးပဲ ရပ်ထားနိုင်သည်။ ပြန်လည် သေးငယ်ခြင်း မရှိပါ။
သင့်ကိုယ်သင် စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတာတွေ ထားခဲ့လိုက်ပါ ... သင့်အမျိုးသမီးကို ပြီးမြောက်ရုံမက တန်းတန်းစွဲဖြစ်သွားအောင် သင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ...
အသက် ၂၅နှစ်မှ အသက် ၆၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်တာမို့ -
- အသက်အရွယ်ကြောင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်သော အမျိုးသားများ
- အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး စွမ်းဆောင်မှု အားလျော့နေသော အမျိုးသားများ
- ငယ်ပါသေးလို့ မိမိကိုယ်ကိုယ်အားမရတဲ့ အမျိုးသားများ
- တိုတိုလေးမို့ မထိရောက်ဘူးဆိုတဲ့ အမျိုးသားများ
- တက်ထွက်ဖြစ်နေလို့ ခဏခဏအရှက်ရနေတဲ့ အမျိုးသားများ
ဒါတွေမေ့ပလိုက်ပါတော့ စွမ်းဆောင်မှုအားကောင်းပြီး ရှည်ရမယ် ကြီးရမယ် ကြာရမယ် သုံးမျိုးစလုံးကို အားဖြည့်ပေးမယ့် Japan နိုင်ငံထုတ်ဆေးစွမ်းကောင်းများကို ၁၀၀% အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
အိမ်ထောင်ရေး မသာယာတာ ဒီအချက်များကြောင့်
၁။ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက်က မပြင်ပေးနိုင်ဘူး
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ လင်ယောင်္ကျားလည်း သူ့အားနည်းချက် ရှိမယ် ဇနီးသည်လည်း ဇနီးသည် အားနည်းချက် ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအားနည်းချက် ရှိတာကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မပြုပြင်ပေးဘဲ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖိနှိပ်ပြီး အနိုင်ယူမယ် အနိုင်ကျင့်ကြမယ်။ ကိုယ်ယူထားတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် အချင်းချင်းတောင်မှ အားနည်းချက်ကို မပြင်ပေးဘဲ ဖိနှိပ်နေမှတော့ ဘေးလူဆို ပိုလို့တောင် ဆိုးမှာပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေး ဘယ်သာယာပ မလဲလေ။
မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ကို မိမိကတောင် တန်ဖိုးမထားရင် အခြားသူကလည်း ဘယ်တန်ဖိုး ထားမလဲလေ။ ဒါကြောင့် မိမိသည် လက်ထပ်ထိန်းမြှားပြီး သည်မှစကာ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ကို လေးစား တန်ဖိုးထားခြင်းဟာလည်း အိမ်ထောင်ရေး အတွက် အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မယ်။ တန်ဖိုး မထားတတ်သရွေ့ ဘယ်လောက် တန်ဖိုး ရှိတာ ရထားထား အလကားပါ။
၃။ အမြဲ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတယ်
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဆူတယ် အော်တယ် နှိမ့်ချပြီး လူသူရှေ့မှာတောင် ဆက်ဆံတယ် အနိုင်ကျင့်တယ် ဒါမျိုး လုပ်လို့ ကိုယ်က အဆင့်အတန်းမြင့်ကာ ဂုဏ်ရှိသွားမယ် မထင်ပါနဲ့။ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ကို နှိမ့်ချရင် မိမိလည်း နိမ့်ကျတယ်ဆိုတာမမြဲမှတ်ထားပေးပါ။
၄။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်က တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်ပေးတယ် သူပေးတဲ့ အဥာဏ်ကို အမြဲပစ်ပယ်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို လုပ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ မှန်ကောင်းလည်း မှန်လိမ့်မယ် အမြဲမှန်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူလှဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်သူရဲ့ အကြံပေးမှုတွေ အကြံဥာဏ်တွေကို နားမထောင် ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်မှတော့ ဘယ်သို့ ဘယ်နည်းမှ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေပါ့မလည်းလေ။
၅။ မချစ်ဘဲ လက်ထပ်လိုက်တာ
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာပေါ်မှာ မှုတည်နေလေရဲ့။ အချစ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ဆိုတာကိုတော့ မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခု အချိန်ကြာကြာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။
၆။ စီးပွားရေး အခက်အခဲ
အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်တည်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေး ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ ဆိုတာကို အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်း သိကြပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးတွေ အရမ်းခက်ခဲလာရင် အိမ်ထောင်ရေးကိုပါ ထိခိုင်တတ်တာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လက်အတူတွဲ ကြိုးစား ရုန်းကန်းနိုင်ပါစေ။ ဒီလို မဟုတ်လို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပုံချနေရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
လူပျိုစစ်ခြင်း/မစစ်ခြင်း နှင့် အပျိုစစ်ခြင်း/မစစ်ခြင်း
စကားချီး :::::: ၏အကြောင်းအရာကိုရေးသားရာတွင် ဆေးပညာနှင့်ဆိုင်သော အယူအဆများအပြင် ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တစ်ချို့ပါဝင်ပါသဖြင့် လွပ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါကြောင်း........ ::::
၏အကြောင်းအရာသည် လူပေါင်းများစွာ သဘောထားကွဲလွဲကာ၊ လိင်မှုရေးရာတွင်ပြဿနာအတက်ဆုံး ကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မိန်းခလေးတစ်ယောက် အပျိုစစ်မစစ်ဟူသည် ယောကျာ်း၊ဘသားများကြားတွင် အလွန်ပင် ပြဿနာတက်သောကိစ္စပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောကြားရာတွင် နှစ်ပိုင်းခွဲခြား၍ပြောရပေမည်။
Physical (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအပိုင်း) နှင့် Psychological (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအပိုင်း)တို့ဖြစ်သည်။
Physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှု အပိုင်းတွင် အပျိုစစ်ခြင်းကြောင့်ဘာတွေခံစားမှုပိုတိုးလာနိုင်သနည်း???
No.1 ကြပ်သည်။ သေချာပါသည်။ အပျိုအစစ်သည် ကျပ်သည်ဟုကြားဖူး၊ဖတ်ဖူး၊သိဖူးကြသည်။ သို့ရာတွင် လက်တွေ့တွင် မည်မျှကျပ်သည်ဆိုသော အတိုင်းအတာသည် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရန် အလွန်ပင်ခက်ခဲလှကြောင်းကြုံဖူးသူတိုင်းသိလိမ့်မည်။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအရလည်းကွာသေးသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိမ်ဆက်ဆံဖူးသော Annaconda size ကပ္ပလီတစ်ယောက်၏ အရပ် 6ပေနီးပါးရှိသော မိန်းမဆိုလျင်တော့ ကွာပေလိမ့်မည်။ တစ်ကယ်တမ်းတွင် တစ်ခါနှစ်ခါဆက်ဆံဖူးသောသူနှင့် တစ်ခါမှမဆက်ဆံဖူးသော အပျိုမြှေးမရှိတော့သော အပျိုစစ်တစ်ယောက်သည် ကျပ်ခြင်း၊မကျပ်ခြင်းတွင် သိသာသောကွာခြားမှု လုံးဝ ပင်မရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။
ကျပ်သောခံစားမှုသက်သက်အတွက်ဆိုလျင် အပျိုစစ်ကျပ်ခြင်းထက်၊ Kegle exercise ထောင်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ထားသော (ဝါ) မျော့ကျပ်ကျပ်ရှိသောမိန်းမက များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အပေါ်ကဆိုသော ကပ္ပလီ၏မိန်းမပင်လျင် သင့်ကို ကျင်သွားလောက်အောင်ညှစ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အပျိုဘယ်လောက်ကျပ်ကျပ်ညှစ်အားကောင်းသူကိုမမှီပါ။
လူပျိုစစ်လျင်တော့ သေချာသည်၊ ခံစားမှုကောင်းဖို့လမ်းလုံးဝမရှိချေ။ တက်ထွက်ဖြစ်လျင်ဖြစ်၊ မဖြစ်လျင်မသွင်းတတ်၊ မဖြစ်လျင် အလောတစ်ကြီးသေလောက်အောင်ဆောင့်ထိုး၍ ငယ်သံပါအောင်အော်ပြေးရပေလိမ့်မည်။
ပြဿနာအစစ်က ၏တွင်လာသည်။ အဓိကက မဟာယောကျာ်းဝါဓဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမှ မသုံးရသေးသောအသစ်ကိုမှ လိုချင်သည့် အတ္တကြောင့်သာလျင် အပျိုစစ်ခြင်း၊ မစစ်ခြင်း ပြဿနာ သမိုင်းမတွင်မီခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Desire of domination၊ မသိစိတ်၏လွမ်းမိုးလိုသော စိတ်အခံကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်၏ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုကို သာယာသည်။ ငါပိုင်ရပြီ၊ ငါသာလျင်ပထမဟူသော ego (အတ္တ) ကိုစားသုံးသည်။ ရှေးယခင်ကတော့ ပြဿနာသိပ်မရှိ၊ ထိုအတ္တအတွက်မိန်းမယူသည်။ ကျန်တဲ့ ပိုလိုချင်တဲ့လိင်သာယာမှုအတွက် prostitute ဆီသွားသည်။ ယခင်တုန်းက prostitude ဆိုသည်မှာ luxary ဖြစ်သည်။ အချောအလှဆုံး၊ လိင်နှင့်ပတ်သတ်လျင် ဆရာ့ဆရာကြီးများဖြစ်သည်။ ကြေးအလွန်ကြီးသည်။ ယောကျာ်းလေးနှင့်မိန်းခလေးအိမ်ထောင်မကျခင် ပတ်သက်ခြင်းသည် အလွန်ကြီးသောပြစ်မှုဖြစ်သည်။ သူ့ဟာနှင့်သူကိုက်နေသည်။
ဒီဖက်ခေတ်တွင်တော့ ပုံစံပြောင်းလာသည်။ လိင်ကိစ္စဟူသည် တစ်ချို့မိန်းခလေးများတွင် 16၊17၊18 လောက်တွင် တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ချို့တော့ရှိပါသည်၊ ကိုယ့်ချစ်သူကိုသာပေးချင်တာမျိုး။ မိန်းခလေးတော်တော်များများကတော့ ကိုယ့်ယောကျာ်းဖြစ်နိုင်မည့်သူကိုသာ ပေးချင်ကြတာများပါသည်။ ပေးခဲ့ပြီး မှားသွားမှ မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်ကြတာလည်းရှိပါသည်။( Drug တို့ အရက်တို့နှင့် မတားယူခြင်းသည် မဒိန်းမှုသာဖြစ်သဖြင့် လုံးဝ လုံးဝ ရှုံ့ချပါသည်။ ထည့်ကိုမပြောလိုပါ။ )
၏တွင် ယောကျာ်းလေးများ၏ အခန်းကဏ္ဏနှင် တာဝန်ခံမှုအပိုင်းရောက်ရှိလာပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် ယောကျာ်လေး 100 တွင် 70 ခန့်သည် ပြင်ပလိင်ဆက်ဆံမှုတွင် အပျိုစစ်တစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကိုယ်က ဘယ်နှစ်ယောက်မှန်းမသိစားခဲ့ပြီး ငါယူမဲ့မိန်းမက အပျိုအစစ်မှ ဟုအော်နေခြင်းသည် တရားသည်ဟုထင်ပါသလော??? ကျွန်တော်ကတော့ ကပ္ပလီ့မိန်းမနှင့်သာ ရစေချင်ပါသည်။ ယောကျာ်းမှန်လျင် အပျိုအစစ်သာရချင်သည်။ ဒါသည် ego ဖြစ်သည်။ လက်ခံသည်၊ အပြစ်မရှိပါ။ သို့သော် ကိုယ်က မယူပဲ အပျိုရည်ဖျက်ခဲ့ပြီးခါမှ၊ အပျိုစစ်ထပ်ယူချင်သည်ဆိုခြင်းသည် မတရားပါ။ မိန်းခလေးအပေါ်တွင်သာမက ကျန်ယောကျာ်းလေးများအပေါ်တွင်ပါမတရားလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မုန့်တစ်ပုံးလုံးတစ်ကိုက်စီကိုက်ထားသလိုပင်။ ထိုသို့ပြောနေခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်သည် အပျိုမစ်သောမိန်းခလေးများအား ဖိပြောခြင်းမဟုတ်။ casual sex သည် ယခုခေတ်တွင်တော်တော်ခေတ်စားလာပါသည်။ ထိုသည်ကိုမပြောလို၊ ယောကျာ်းနှင် မိန်းမနှစ်ဦးလုံးသဘောတူလျင် ဘာပြဿနာမှမရှိ။ ရသည်။ ok သည်။ အဆင်ပြေသည်။ ရောဂါဘေးနှင့် ကျန်အန္တရယ်များအတွက်ကာကွယ်ဖို့သာလိုသည်။
ကျွန်တော်ပြောချင်သည်က ယူမည်ဟုထင်သောမိန်းခလေးကို ယူမည်ဟူသောဂတိဖြင့် ကာမရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသည်မှာ crime ဖြစ်သည်။
ထိုအခါကြုံလည်းမကြုံ့ဖူးဘူး၊ အပျိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုသူတွေကတော့၊ ပြောချင်ပါတယ်၊ ရမှာပါ၊ မပူပါနဲ့။ စေတနာအကျိုးပေးမှာပါ။
တစ်ကယ်တော့ အိမ်ထောင်းရေးဆိုတာ တစ်ညတည်းမဟုတ်ပါ။ အပျိုစစ်ကိုရခဲ့လည်း နောက်ပိုင်းမိန်းမက ဒီအတိုင်းဘဲဘာမှပညာမတိုးတတ်လာဆို ယောကျာ်းသားများက စိတ်ကုန်ချင်တတ်သေး။
အပျိုစစ်ခြင်းမစစ်ခြင်းသည် တစ်ညတာအရေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုသည်မှာ တစ်ဘဝတာအရေးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သည်းခံမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ အနစ်နာခံမှု၊ စွန့်လွှတ်မှု၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းများနဲ့တည်ဆောက်ရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအချို့တို့သည် လိင်အင်္ဂါသေးနေလို့ စိတ်ပျတ်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေလည်း လိင်အင်္ဂါသေးတာကို ယောက်ကျားမစစ်ဖူးလို့ပြောသံတွေ အချင်းချင်းစနောက်တာတွေကိုခံစားရပါတယ်။အိမ်တောင်သယ်အမျိုးသားတွေကျပြန်တော့ လိင်အင်္ဂါသေးတဲအပြင် ကာမစွမ်းအားကျဆင်းနေရင်တော့ ကိုယ်ကြင်သူဇနီးမယားရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုပါ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် ပျောက်ဆုံးနေတာဟာ တကယ်ကို ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုမရှိတာဟာ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို အခြေအနေကြုံလာရင် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ၁။ ပြဿနာကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ ဘယ်ပြဿနာမဆို ဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးနည်းလမ်းက အခြေအနေကို လက်ခံလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား တော်တော်များများက ဘ၀ရဲ့အခြားကိစ္စတွေကို ပြစ်တင်တတ်ကြပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ လက်မခံတတ်ကြ ပါဘူး။ တကယ်တော့ လိင်စိတ်ကြံ့ခိုင်မှုနည်းပါးနေတာကို အမှန်အတိုင်းလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြေရှင်းရတာ ပိုမိုလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှက်ကြောက်မနေပဲ အမှန်အတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၂။ ဆေးဝါးအထောက်အပံ့ရယူပါ။ သင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အဖြေရှာပါ။ ဆေးဝါးဖြည့်စွက်စာတွေက အကျိုးရှိရှိ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Kamagra လိုမျိုး အခြားဆေးဝါးတွေကလည်း တက်စ်တိုစတီရုန်းထုတ်လုပ် မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး လိင်တံထောင်မတ်နေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ Kamagra ဆေးက ညှိုးနေမှ မဟုတ်ပါဘူး... လိင်စိတ် အပြည့်အ၀ရရှိစေတာမို့လို့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၃။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖြေရှင်းပါ။ စိတ်ခံစားမှု မညီညွတ်တာကလည်း ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အမျိုးသားတွေက ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို စိတ်ပျက်နေတတ်ကြပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ရောဂါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အကူအညီ ယူပြီး စိတ်သက်သာရာရဖို့လည်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ၄။ အိပ်ရာအတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာများဖန်တီးပါ။ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်လျော့နည်းလာတာဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိလို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ဖွင့်ပြောပြီး စိတ်ကူးသစ်တွေ၊ ပုံစံသစ်တွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ ၅။ အပ်စိုက်ကုသမှုခံယူပါ။ အပ်စိုက်ကုသတာဟာ လိင်စိတ်တက်ကြွစေဖို့အတွက် သုံးတဲ့ ရှေးကုထုံးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပ်စိုက်ကုသခြင်းနဲ့အတူ တိုင်းရင်းဆေးဝါးတွေကို ပူးတွဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့စိတ်ကို ပြန်လည် တက်ကြွလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပ်စိုက်ကုသသူတစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သင့်ရဲ့လိင်စွမ်းရည် အသစ်ဖြစ်စေဖို့ ကုသမှုခံယူလိုက်ပါ။ ၆။ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ပါ။ သင့်တော်တဲ့အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်တာဟာ လိင်ကိစ္စအပါအ၀င် အလုံးစုံသော ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ အသားဓာတ်ကြွယ်ဝအစားအစာတွေ၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေက ဟော်မုန်းပမာဏတွေကို ညီမျှစေပြီး လိင်စိတ်ကို အားဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကလည်း သွေးလည်ပတ်မှုကို မှန်ကန်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ သင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းစေတာကိုတော့ သင်သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ Sex ဟာ သင်နဲ့ သင့်အမျိုးသား ကျန်းမာရေး အတွက် နည်းပေါင်းများစွာနဲ့ ကောင်းမွန်စေတာကိုတော့ သင်သိသေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်စဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်မှ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာတာကြောင့် နာကျင်မှု သက်သာကာ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းတာ၊ ခုခံအားစနစ် ကောင်းမွန်တာနဲ့ မီးယပ်သွေးဆုံး ဝေဒနာပါ သက်သာနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
(၁) နာတာရှည် နာကျင်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်
သင်ခေါင်းကိုက်နေစဉ်မှာ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်ပါ။ သင်ရဲ့ ယောနိနံရံနဲ့ အစေ့ကို နှိုးဆွပေးတာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း Endorphins၊ ကော်တီကို စတီးရွိုက်နဲ့ အကိုက်အခဲ သက်သာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ် ရောက်နေစဉ်မှာ နာကျင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု နှစ်ဆပိုများသွားတယ်လို့ သုတေသန ပြုသူတွေက ဆိုပါတယ်။
(၂) သားမြတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းစေပါတယ်
လိင်စိတ်ကြွဖို့ နှိုးဆွနေစဉ်နဲ့ လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်နေစဉ်မှာ သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ဟော်မုန်းအဆင့်တွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု ဟော်မုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Oxytocin နဲ့ DHEA တွေဟာ သားမြတ်ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
လေ့လာမှု တစ်ခု အရ တစ်လကို တစ်ကြိမ်ထက် ပိုပြီး လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်တာ နည်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် သားမြတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂရိမှ သုတေသန ပြုသူတွေကလည်း အသက်(၅၀) အရွယ်မှာ လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ် ရရှိမှု တစ်လကို အနည်းဆုံး ခုနစ်ကြိမ် ရရှိသူ အမျိုးသားတွေဟာလည်း အမျိုးသား သားမြတ်ကင်ဆာ (Male Breast Cancer)ဖြစ်နိုင်ခြေ သိသိသာသာနည်းတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
(၃) သင့်နှလုံး ကျန်းမာစေပါတယ်
လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်တာဟာ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်သလိုမျိုး အတော်အသင့် လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သလိုမျိုးပါပဲ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်နိုင်လေ ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးပိုရှိလေပါ။ လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ်ရောက်ရင် သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ တစ်မိနစ်ကို ၁၁၀ အထိ ရောက်နိုင်တာမို့ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရွရွလေး ပြေးရင် ရရှိတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။
(၄) ဆီးကျိတ်ကို ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါတယ်
တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး လေးကြိမ် သုက်လွှတ်တဲ့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားတွေဟာ သုက်လွှတ်နည်းတဲ့ အမျိုးသားတွေထက် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါတယ်လို့ သြစတြေးလျမှ လေ့လာမှု အရ သိရပါတယ်။ ရေပိုက်ထဲကရေဟာ စီးဆင်းနေရင် ပိုက်အတွင်း ပိတ်ဆို့မှု နည်းနေသလိုမျိုးပေါ့လို့ Alriarado ဆေးရုံမှ MD.Irwin ကပြောပါတယ်။
(၅) စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေပါတယ်
စိတ်ဖိစီးမှုများ နိုင်တဲ့ ရက်မတိုင်ခင် နှစ်ပတ်အလိုမှာ ဖိုမဆက်ဆံရေး လုပ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ လူအများရှေ့ စကားထွက်ပြောရာမှာ ချောမွေ့နိုင်ပြီး စိတ်တွက် တွက်ချက်ရာမှာလည်း အဆင်ပြေတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လူအများရှေ့မှာ စကားပြောနေစဉ် သူတို့ရဲ့ အပေါ်သွေး ဖိအားမြင့်တက်မှု နည်းပြီး ပုံမှန်အဆင့် ပြန်ရောက်တာဟာလည်း ဖိုမဆက်ဆံမှု မလုပ်သူတွေထက် ပိုမြန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်တာကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုအလုပ်လုပ် နိုင်တာကြောင့်ပါ။ တခြားအကြောင်းတစ်ခုက လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ အာရုံကြောတွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်လို့ပါ ဆိုပါတယ်။
(၆) သင်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်သူတွေဟာ မလုပ်တဲ့ သူတွေထက် ရောဂါပိုးကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားတယ်လို့ သုတေသနပြုသူတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်စိတ်ကြွဖို့ နှိုးဆွနေစဉ်နဲ့ လိင်ကိစ္စ အထွတ်အထိပ် ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို သွေးဖောက်စစ်ကြည့်ရာ ရောဂါပိုးကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ သွေးဖြူဥတွေ များနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ သီချင်းနားထောင်တာလိုမျိုး စိတ်ဖိစီးမှုကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းလိုမျိုးပဲ ရောဂါပိုးကို တွန်းလှန်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ အချို့ပရိုတင်းအရည်တွေ ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
(၇) မီးယပ်သွေးဆုံးစဉ်မှာ မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်
လိင်ဆက်ဆံမှု တစ်နှစ်ကို ၁၀ကြိမ် ထက်ပိုပြီးလုပ်တဲ့ မီးယပ်သွေးဆုံးပြီးသူ အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု နည်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် မိန်းမကိုယ် သိမ်သွားခြင်း နည်းတယ်လို့ New Jersey မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံလို စိတ်ပေါ်လာအောင် နှိုးဆွပေးတာကြောင့် မိန်းမကိုယ်အတွင်း သွေးတွေ ရောက်ရှိလာကာ အာဟာရနဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေ ရရှိစေလို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဲဒီ အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုတာကြောင့် အသက်ကြီးလာရင် အဲဒီတစ်သျှူးသိမ်သွားတာနဲ့ ကျုံ့နိုင်အားလျော့သွားတာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယူဆကြပါတယ်။
မိန်းမကို ပျော်အောင်ထားနိူင်တဲ့ ယောင်္ကျား
မိန်းမ စကား နားထောင်နိူင်တဲ့ယောင်္ကျား
အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းတွေရပြီး အောင်မြင်မှုကို ရသွားတယ်
မိန်းမ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတာ အားပေးနိူင်တဲ့ယောင်္ကျား
ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ရသွားတယ်
မိန်းမကို မိဖုရားလိုထားနိူင်တဲ့ ယောင်္ကျား
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုရင်လို စံစား ရသွားတယ်
မိသားစုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ယောင်္ကျား
မိသားစု ရဲ့ လေးစားခြင်းကို အပြည့်အဝ ရသွားတယ်
ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မရိုက်ဘူး
ကိုယ့်မိန်းမကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် ၊စိတ်ပျက်အောင် မလုပ်ဘူး
ကိုယ့်မိန်းမကို လူတွေအလည်မှာ မျက်နှာမငယ်စေဘူး
ကိုယ့်မိန်းမ ကိုအချစ်မလျော့ဘူး ၊ ရိုးအီမသွားဘူး
လင့်ကျင့်ဝတ် နှင့်အညီ တာဝန်ကျေ နိူင်တာပါ။
Comment တစ်ချက် ရေးလိုက်တာနဲ့
Credit to သူငယ်ချင်း (ကောင်းသန့်)
သင့်အပေါ် နားလည်မှုရှိတဲ့ သူက သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကြည့်ပြီး ချစ်တယ်...
သင့်အပေါ် နားမလည်တဲ့သူက သူ့ ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ကြည့်ပြီး ချစ်တယ်....
သင့်ကို နားလည်သူက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ နူးညံ့စွာ ချစ်တဲ့အတွက် သင် ကံကောင်းတယ်...
သင့်ကို နားမလည်သူက အတ္တနဲ့ကြမ်းတမ်းစွာ ချစ်တဲ့အတွက် သင် ပင်ပန်းရတယ်...
အချစ်ထက် နားလည်မှုကို ရရှိဖို့ ပိုခက်ခဲပါတယ်...
သင့်အပေါ် နားလည်မှုရှိတဲ့ သူ
ငါ့အတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အိမ် အလိုမရှိဘူး
ငါလိုချင်တာ ငါ့တစ်နေရာစာ နားခိုခွင့်ရှိတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ နင့်ရဲ့ရင်ခွင်ကျယ်
ငါ့အတွက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကားတွေလည်း အလိုမရှိဘူး
ငါလိုချင်တာ ဘ၀ခရီး ဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်း လက်တွဲ မဖြုတ်မဲ့ နင့်ရဲ့ လက်တစ်စုံ
ငါ့အတွက် ရွှေငွေတွေ အလို မရှိဘူး
ငါလိုချင်တာ ယိုင်လဲနေချိန် မှီခိုစရာ နင့်ရဲ့ ပုခုံးတစ်စုံ
တကယ်တော့ ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာ လူက လုပ်ယူလို့ ရတဲ့ အရာတွေပါ
စည်းစိမ်မရှိလည်း အမြဲမခွဲ ဘ၀ရဲ့ နေ၀င်ချိန်အထိ သစ္စာရှိနေပေးမယ့်
နင်သာရှိရင်ငါ့အတွက် ပြည့်စုံပါတယ် ချစ်သူရယ်
တချို့ တွေက ချစ်လျှက်နဲ့ ကွဲကြတယ်
မာနကတွေ ကိုရှေ့မှာထားလို့ လေ....။
တချို့ ကျ ကွဲလျှက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်
သံယောဇဉ်ကို ရှေ့မှာထားလို့ လေ...။
တချို့ ကျတော့လဲ မုသားတွေကြောင့်
တချို့ ကျတော့လဲ မဆုံစည်းနိုင်မှန်
သိရက်နဲ့နားလည်မှုနဲ့ခိုင်မြဲကြတယ်။
မင်းသူ့ကိုသိပ်သတိရနေတယ် ။ ။
ငါ့ကို ချစ်တယ် ပြောပီး တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို
မျှော်လင့်မနေပါနဲ့ လား ချစ်သူ..........
ငါ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ခိုနားပီး တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို
လွမ်းမနေပါနဲ့ လား ချစ်သူ...........
ငါ့ကို လက်တွဲမယ်ပြောပီး တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို
အနာဂတ် စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ပုံမဖော်ချင်ပါနဲ့ လားချစ်သူ.......
နင့်အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ ငါ ဘယ်လောက်ထိ
တချို့ လူတွေက ခက်ထန်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီ
တကယ်စိတ်ထဲမှာ တခုခုဆို စိတ်အားငယ်တတ်တယ်။ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဖုံးကွယ်တတ်ကြတယ် ။
✂ တချို့ လူတွေက လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်နေရက်သားနဲ့ တကယ်မချစ်သလို ဟန်ဆောင်တတ်တယ် ဘယ်သူမှမသိအောင် ဖုံးကွယ်တတ်ကြတယ် ။
✂ တချို့ လူတွေက နှုတ်ခမ်းတွေ ပြုံးနေပေမယ့်
မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်အငွေ့တွေဖွဲ့နေတာ ဘယ်သူမှမသိအောင် မသိအောင် ဖုံးကွယ်တတ်ကြတယ်။
✂ ငါလဲ နင်ကို ချစ်လို့ တခုခုဆို စိတ်အားငယ်တတ်တာ ၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကြောင့် ငိုတတ်တာ၊ နင်ကို ချစ်တာကို ဟန်မဆောင်တတ်တာတွေကို ဖုံးကွယ်တတ်ခဲ့ရင် အရမ်းကောင်းမယ်။
✿✿✿ Poem ✿✿✿
အချိန်ဆို ကိုယ်စီ မာနလေးတွေနဲ့ တော့ သူအရင်
အရင်ပြန်ခေါ်တဲ့သူက ပိုချစ်တဲ့သူဆို ငါက အမြဲတမ်း
ငါ့ မာနလေးကိုချိုးနှိမ်ပီး နင့်ဆီအရင်ဆက်သွယ်မိတယ်လေ
ငါ နင့်ဆီမဆက်သွယ်မချင်း ငါ့ ကိုပစ်ထားတတ်တာ
ငါ ချစ်သလောက် နင်က မချစ်လို့ ပေါ့နော်............
ငါ မစဉ်းစားချင်ပါဘူး ချစ်သူ နင်က င့ါလောက် ချစ်တာ
မချစ်တာထက် ငါကတော့ နင်နဲ့ ဝေးနေရတဲ့ အချိန်ခဏလေးမှာ
တောင်အရမ်းကို ခံစားရလွန်းလို့ ငါ ဘယ်လိုမှ မနေတတ်ခဲ့ဘူး
ချစ်သူ........... ကျေးဇူးပြုပီး ငါနဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်ပြေးဖို့ 
တော့ မကြိုးစားလိုက်ပါနဲ့ နော် ချစ်သူ..............
••• ♥ •• ♥ •••
နင့်ကို အရမ်းချစ်လို့စတဲ့ နောက်တဲ့အခါ မငြိုငြင်ပါနဲ့ ဟာ...
နင်စိတ်တိုတာလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းလို့ ပါ .. .. ..
နင်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ ငါ ဒေါသဖြစ်ပြီး အော်ငေါက်တဲ့ အခါ မငြိုငြင်ပါနဲ့ ဟာ...
နင် နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ မတွေ့ ရတဲ့ရက်တွေက ငါ့အတွက်ပူလောင်လို့ ပါ.. .. ..
နင် ခဏခဏ စိတ်မကောက်ပါနဲ့ ဟာ ...
နင် စိတ်ကောက်ပြီး မခေါ်မပြောပဲနေတဲ့အခါ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းလို့ ပါ.. .. ..
Facebook ပေါ်မှာ Photos တွေခဏခဏ မတင်ပါနဲ့ ဟာ...
နင့် ပုံကို ငါမဟုတ်တဲ့အခြားသူတွေက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဘာဘာညာညာပြောရင် ငါမုန်းလို့ ပါ.. ..
အွန်လိုင်းမှာ ငါမရှိတဲ့အခါ ဘယ်သူနဲ့ မှမချက်ပါနဲ့ ဟာ...
နင် ငါမဟုတ်တဲ့အခြားသူတွေနဲ့ စကားတွေပြောရင် ငါအရမ်းသဝန်တိုလို့ ပါ...
ငါ့အပေါ်မှာ မကျေနပ်ချက်တဲ့ ရှိတဲ့အခါပြောပြပေးပါ ဒီလိုကြီးတော့ပစ်မထားပါနဲ့ ဟာ...
ငါက နင့်အတွက် အကောင်းဆုံးတွေကို ဖြစ်စေချင်လို့ ပါ.. .. ..
နင်တွဲထားတဲ့ ငါ့ရဲ့ လက်ကလေး ကို ဘယ်တော့မှ လွှတ်ဖို့ မတောင်းဆိုပါနဲ့ ဟာ...
နင်မရှိရင် မဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ ငါမရှင်သန်ချင်လို့ ပါ.. .. ..
နင်ပြောသမျှ ရေစီးကြောင်းကတိစကားလေးတွေက ဘာနဲ့ မှဖြတ်တောက်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ...
ငါ ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး ယုံကြည်ထားရင်း နင့်ရဲ့ ဘေးမှာပဲ နေ့ ရက်တွေကို ကုန်ဆုံးခွင့်ပြုပါ...
••• ♥ •• ♥ ••• ErOs KiKi ••• ♥ •• ♥ •••
✂ နင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်
ဘာဟန်ဆောင်မှုမှ မသုံးခဲ့ပါဘူး ။
အရာရာကို အလျှော့ပေးတတ်ခဲ့တာ ။
ငါသိက္ခာကို ငါကိုယ်တိုင် မေ့ထားခဲ့သူပါ......♨❤♨
ဘာဖြစ်ဖြစ် ခွင့်လွတ်ပြီ နာကျင်စေမယ့် စကားတွေကို
ငါအမှတ်မရှိသူတစ်ယောက်လို ငါစိတ်ဓာတ်ကို ငါကိုယ်တိုင် အသေသတ်ခဲ့သူပါ......♨❤♨
✂ နားလည်ပေးပါလို့ မပြောပါဖူး
ခပ်မှိန်မှိန် အတ္တတချို့တောင် မထားနိုင်တဲ့
ငါအချစ် နင်တနေ့ နင်သိပါစေ......♨❤♨
သူတွေအတွက်တော့ အချစ်ဆိုတာ စွန့် လွှတ်ခြင်းတဲ့........
စွန့် လွှတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအတွက် အချစ်ဆိုတာ
ကိုယ့်ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့
အချစ်ကိုဘယ်လိုပဲ ဖွင့်ဆိုနေကျပါစေ... စွန့် လွှတ်လိုက်ရတဲ့
အလွယ်တကူ တခြားသူအပေါ် ကောင်းတာတွေ မဖြစ်စေနဲ့ ။
အပေါစား အညံ့စားလို့ ထင်နေပြီး တန်ဖိုးမထားတတ်မှာစိုးလို့ ပါ ...
Credit - Jin Li Chao
ကျွန်တော်မိန်းမယူချင်နေတာ ကြာပြီဗျ။ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတော့ ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကလဲ သာမန်ပါပဲ။
ကျွန်တော်ယူမယ့်မိန်းမဟာ လူတကာကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အလှဘုရင်မဖြစ်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ်လုံးသေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့ ချစ်စရာမျက်နှာရှိရင်တော်ပြီ။ ကျွန်တော်ရယ်စရာပြောရင် လိုက်ရယ်တတ်ရမယ်။
ကျွန်တော်ယူမယ့်မိန်းမရဲ့ အိမ်ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ဆိုတာ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အိမ်ကျယ်ရင်ပြီးရော။
မင်္ဂလာဆောင်ရင် ကုန်ကျစရိတ်ကို တစ်ဝက်စီကျခံမယ်။ ကျွန်တော်ယူမယ့် မိန်းမကတစ်ဝက် သူ့မိဘကတစ်ဝက်။
သူမရဲ့ကျန်းမာရေးကို ကျွန်တော်ဂရုစိုက်မယ်။ ချိုလွန်းတဲ့အစားအစာတွေ ဥပမာ ချောကလက်ကို သူမလက်ဖျားနဲ့တောင် မထိစေရဘူး။ ကျွန်တော်ပဲစားမယ်။
ထမင်းဟင်းကို သူမဘယ်လိုပဲချက်ချက် ကျွန်တော်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အရသာရှိရင်တော်ပြီ။ မြန်မာဟင်းလျာချည်းပဲ ချက်စရာမလိုဘူး။ ဒီနေ့မြန်မာစာ၊ နောက်နေ့တရုတ်စာ၊ နောက်နေ့ကုလားစား၊ စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲချက်ချက်လား။ ရတယ်။ ဒီကိစ္စမှာသူမကို လုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။
အ၀တ်လျှော်ရမယ်။ မီးပူတိုက်ရမယ်လို့ သူမကို ကျွန်တော်မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အ၀တ်အစား အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းနေရမယ်။
လှဲကျင်းလျှော်ဖွပ်လို့ ပင်ပန်းလာပြီလား။ အဲဒါဆို မိန်းမကို ခဏအနားယူခိုင်းမယ်။ အမောပြေပြီဆိုမှ ကျန်တဲ့ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေကို ဆေးခိုင်းမယ်။
ဈေးကိုတော့အတူတူသွားမယ်။ အသွားမှာ ဈေးခြင်းတောင်းကို ကျွန်တော်ကိုင်မယ်။ အပြန်မှာ သူမဆွဲလာမယ်။
သူမရဲ့အသက်ကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားမယ်။ သူ့လက်ထဲကို ပိုက်ဆံတပြားမှ မထည့်ပေးဘူး။ လူဆိုး၊ သူခိုးတွေက ပေါတယ်မှတ်လား။
ကျွန်တော့်အမိန့်ကို နာခံရမယ်လို့မပြောဘူး။ ကျွန်တော့်စကားနားထောင်ရင်တော်ပြီ။ နားမထောင်နိုင်ဘူးလား ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်ရှာပစေပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။
ရယ်မောခြင်းသည် အသက်ရှည်၏တဲ့ ...
တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက် အသက်ပိုရှည်မှာပါ ...
✂ မထင်မှတ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ အလွမ်းတွေကို
ဘာနဲ့ တားဆီးပြီ မလွမ်းပါနဲ့လို့ ပြောရမှာလဲ
✂ ကြေကွဲသံစဉ်တွေကို မုန်းတတ်တဲ့ ငါအတွက်
အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်ရတာမှ မကြာသေးဖူး
အလွမ်းသံစဉ်တွေ နားထောင်ရင် ဘာကြောင့် လွမ်းတတ်နေရတာလဲ
✂ တိတ်တဆိတ် တိုးဝင်လာတဲ့ လေညင်းလေးတိုက်ခိုက်တဲ့ အချိန်တောင် ငါသူအကြောင်း စဉ်စားရင် လွမ်းတတ်နေပြီ
သေချာတယ် ချစ်သူငါလဲ စိတ်ကူတွေ ယဉ်နေတတ်ပြန်ပြီ ထင်တယ်
✂ နီးစပ်ခွင့် ဘယ်အချိန်ရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက်ဘ၀အတွက် ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ငါတို့ ရင်ထဲအမြဲချစ်ကြမယ်နော်ချစ်သူ
( ဘာမှမထိရ မတွေ့ရအတော်အချိန်ကုန်တာ)
အရှုံးဆုံးအလုပ် - အွန်လိုင်းကနေပဲနှစ်ရှည်လများချစ်ပြီး
( အမှန်ကတွေ့ချိန်က တလတောင်မပြည့်)
ရန်ဖြစ်ရခြင်း ပင်ပန်းတာရော ရန်ဖြစ်တာရောပေါင်းသော် သေချင်စိတ်ပါဖြစ်လာခြင်း
သတိရသည် လွမ်းသည် ဘယ်လိုပဲပြောပြော
Check in. ဝင်ခိုင်းဒီနေရာဝင်ခိုင်းအစစ်အဆေးထူခြင်း
မပျင်းရဲခြင်း မပို့ပဲနေမိလျှင်အချစ်လျော့တာလား ပေါ့တာလား
အွန်လိုင်းမှချစ်ရသောအလုပ်သည်တော်ရုံအချစ်ဖြင့်မလွယ် ခန္တီစ သည်းခံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီးနားလည်မှုအပြည့်အချစ်အပြည့်ဖြင့်သာရှေ့ဆက်မှမြဲနိုင်ပါသည်
အခုချိန်မှာငါတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ဝေးကွာနေရတာက ငါတို့ တွေတစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ဘယ်လောက်
ချစ်တယ်ဆိုတာကို ဝေးကွာခြင်းနဲ့ စမ်းသပ်နေတယ်လို့ 
ခံစားနေရတာဟာ ငါတို့ အချစ်တွေအပေါ်ဘယ်လောက်
ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကို အလွမ်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်နေတယ်
အခုချိန်မှာငါတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက် ပြန်မဆုံနိုင်သေးတာက
နောင်တစ်ချိန်မှာ ငါတို့ တစ်သက်လုံးနီးစပ်ရဖို့ အတွက်
အခုချိန်ကခဏတာ ဝေးကွာနေပေးရတာလို့ သက်မှတ်လိုက်ကျ
ငါတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်တဲ့ အချစ်က
အချစ်စစ်မှန်ရင် ဝေးကွားခြင်းဆိုတာကငါတို့အချစ်တွေကို
ငါ့ သူ့ ကို တ ကယ် ချစ် မိ သွား ပါ လားးးး
ဘယ် လို က နေ ဘယ် လို
အွန် လိုင်း ပေါ် မှာ တွေ့ တဲ့ အ ချစ် ကို
အ စစ် လို့ ထင် ပြီး
သူ့ ကို တ ကယ် ချစ် မိ သွား ပါ လိမ့်...
စဉ်း စား ရင်း ခေါင်း ကုတ်... ခေါင်း ရှုပ် တော့ မ ခံ တော့ ဘူးးးး
အဲ့ ဒီ အ ချစ် လို့ထင် တဲ့ အ ထဲ ကို
ငါ့ ရဲ့ အ စစ် တွေ့ ထပ် ထည့်...
"သက် ရောက် မှု တိုင်း မှာ တူ ညီ တဲ့ တုန့် ပြန် မှု ရှိ တယ် " ဆို တဲ့
န ယူ တန် ရဲ့ တ တိ ယ နိ ယာ မ ကို လက် ကိုင် ထား ပြီး
မူး ချင် မူး ..ရူး ချင် ရူး
ဆက် ချစ် လိုက် တော့ မယ်...ဒါ ပဲ။ :p
ဝေလင်း (ဖျာပုံ) '
တ ကယ် ချစ် မိ သွား ပါ လားးးး
မအားလို့ ဖုန်းမဆက်နိုင်မှန်းသိလည်း ဖုန်းကိုကြည့်နေမိတယ်
နင်ငါ့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပစ်ထားတဲ့အခါ ...
ငါ့စေတနာတွေကို နင်ဒေါသနဲ့တုန့်ပြန်တဲ့အခါ ...
နင့်ဆီက ကြင်နာယုယမှုတွေကို တောင့်တမိတဲ့အခါ ...
တခြားအရာတွေကို ငါ့ထက်ပိုပြီး နင်ဦးစားပေးတဲ့အခါ ...
ငါ့ခံစားချက်တွေကို နင်နားလည်မပေးတဲ့အခါ ...
▶ ငါမျက်ရည်ကျတဲ့အခါ ...
ငါ့ရင်ထဲမှာ ပြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေ အပြင်ကိုလျှံထွက်လာတာပါ :) ❤ ❤
ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဆိုးစရာတွေ ကြုံလာပါစေ။ ကြံဖန်ပြီး နားလည် ခွင့်လွှတ်လေ့ရှိတယ်။ သ၀န်တိုတတ်တယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူကို အကောင်းဆုံးတွေပဲ ဖန်တည်း ပေးချင်တယ်။ ချစ်သူအတွက်ဆို ခြေ လက်တွေ ဖြတ်ပေးရမယ် ဆိုရင်တောင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် မရိုက်နှက်ဘူး။ နားလည်မှုတွေ အဆုံးထိ လွဲမှားပြီး လမ်းခွဲဖို့ အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ရင်တောင် တစ်ချိန်က ပျော်ရွှင်စွာ ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့တာကို သတိရအောက်မေ့ပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်နေတတ်တယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူ လိုချင်တာကို ကိုယ့်မှာသာရှိနေခဲ့ရင် အမြဲ ပေးဆပ်ဖို့ အသင့် ဖြစ်နေရမယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ တိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ချစ်သူကို ချမနင်းဘူး။ ဒါတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင် ချစ်သူပာာ ပါရမီဖြည့်ဘက်လို အချစ်စစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချစ်အတွက်အရိုးသားဆုံးလူတော့ ဖြစ်ရမယ်။
ချောမောလှပသူ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်...
◘ငါဟာ.. နင့်ရဲ့ ..
ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုရှိတယ် ...
ဖုန်းထဲမှာ မရှိတော့ပေမယ့်လည်း အမြဲမှတ်မိနေတယ် ...
ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ မဆက်ပေးရဲဘူး ...
တေးသီချင်း တစ်ပုဒ်ရှိတယ် ...
နောက်ထပ်နားထောင်မိမှာကို သိပ်ကြောက်တယ် ..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ... မျက်ရည်တွေကို မထိန်းနိုင်လို့ ပါ ...
မေ့ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ် ...
ဒါပေမယ့် ပြန်ပြီးသတိရလွမ်းနေမိတာ အချိန်တိုင်းပါပဲ ...
ဒီစကားတခွန်း သူတစ်ယောက်အတွက်ဘဲ ပြောချင်တယ်
✹✹အကြိမ်ကြိမ် မေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ် တချိန်က
ဖြစ်သင့်လား မဖြစ်သင့်လားဆိုပြီးလဲ အကြိမ်ကြိမ်တွေးခဲ့ ဖူးပါတယ်
✹✹ပယ်မချနိုင်လောက်အောင် နှလုံးသားက သူကိုချစ်တယ်
တခါတလေ ငါချစ်တဲ့ အချစ်က နင်ကို မွန်းကျပ်စေလား ငါမသိဖူး
ငါနင်ကို ချစ်တာဘဲ သိတယ်
✹✹နောက်ဆုံး ရလဒ် ငါမျှော်လင့်ခဲ့မိတာက နင်နဲ့ နီးရဖို့
ဒါပေမယ့် ပိုချစ်တဲ့သူက ပိုခံစားရစမြဲဘဲလေ.....
နင်အားရင် တကြိမ် တခါဖြစ်ဖြစ်
နင်အဆင်ပြေရင် စာတစ်ကြောင်းတလေ ဖြစ်ဖြစ်
ငါ့ကို မက်ဆခ်ျ့ပို့ ပေးပါ.......
ကိုယ်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်သူရယ်.......
ဒီလို ဖြည့်ဆည်းခွင့်မရပဲ အနားမှာ ဥပေက္ခာတွေနဲ့ဆက်ဆံခံနေရတာကမှ
ငါနင့်အတွက် အရာရာပေးဆပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ငါ အသက်ဆက်ရှင်နေဦးမှာပါ....
မေတ္တာဖြင့် မျှဝေသူ --
photo -(ツ) My Angel ♥-♥ Hopes (ツ)
နင်ဖုံးမကိုင်တဲ့အခါတိုင်း နံရံကနာရီကို မော့ကြည့်ပြီး 'ဒီ အချိန်အလုပ်ရှုပ်နေလို့ 'ပါဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်တဲ့အတွေးတွေးပြီး ကျလုဆဲမျက်ရည်ကို အံကြိတ်ပြန်ရှိုက်လိုက်တာကို
နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ခေါ်သင့် မခေါ်သင့် ဒွိဟဖြစ်ရတဲ့အတွေးကို
နင်ဘာဖြစ်နေလဲ ဘာများပြသာနာတက်နေလဲ ဆိုတဲ့အတွေးက ငါ့နှလုံးသားကို ဆွဲဆုတ်နေတာထက် ပိုမွန်းကျပ်တယ်ဆိုတာကို
မအားသေးလို့နောက်မှ ဆိုပြီး ပြောသွား
နင့်ဖုံးမအားတဲ့အခါ ဘယ်သူနဲ့များလဲဆိုတဲ့အတွေးက ငါ့ရင်ကိုဘယ်လောက်ပူလောင်စေလဲဆိုတာကို
နင်သိတာ ဖုံးပြန်ဆက်မိရင် နင်အရစ်ခံရမယ်ဆိုတာလေ
ဒါတွေကလဲ ငါစိုးရိမ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်မလာဘူး
နင်သိမှာပါ ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း စိတ်ကောက်ပြီးတိုင်း
နင့်ကိုလွတ်ထွက်သွားမတတ်ဖက်ထား ပြီးငိုမိတာ နင့်ကိုငါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး ဆိုတာ သေချာသွားလို့ပေါ့
မေးစရာတောင် မလိုတဲ့ မေးခွန်းပါ
ငါ့ရဲ့ အလွမ်းတွေကို စာဖွဲ့ ပြောရင်
လူတစ်ယောက် သင့်ကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ
တခြားအချိန်မှာ သင့်အပေါ်သူဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး
သင်တို့ရန်ဖြစ်ချိန်မှာ သင့်အပေါ် သူဘယ်လိုပြုမူတယ်ဆိုတာကိုလဲ ကြည့်ရသေးတယ်
ယောက်ျားမိန်းမဆက်ဆံရေးမှာ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟင်းချက်တာနဲ့တူတယ်
တချို့ရန်က ရင်ထဲထည့်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပွင့်ထွက်စေတယ်၊ အချင်းချင်းအပေါ် ပွင့်လင်းစေတယ်
တချို့ဟင်းက ကြော်ချက်ပြီးစားရင် ပိုမွှေး၊ ပိုချိုသလိုပေါ့
ဒါပေမယ့် တချို့ဟင်းက ကြာကြာကြော်လို့မရဘူး၊ ကြာကြာကြော်ချက်လေ အာဟာရဓာတ်ပျက်လေ
လူကလည်း မကြာခဏရန်ဖြစ်လေ သံယောဇဉ်ကို ပွန်းရှလေ၊ လှပတဲ့အမှတ်တရတွေကို ပျောက်ပျက်လေဖြစ်စေတယ်
ဒါကြောင့် ဟင်းဆိုတိုင်းလည်း ကြာကြာမကြော်ချက်နဲ့၊ ရန်ဆိုတိုင်းလည်း ခဏခဏမဖြစ်နဲ့
အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာ နွေးထွေးမှုကိုထိန်းထားရတယ်၊ ရန်ချည်းဖြစ်နေလို့လည်း ခရီးမပေါက်ပါဘူး.....
မှတ်ချက်....ဟင်းချက်ရင်းနဲ့လည်း ရန်မဖြစ်ကြနဲ့ပေါ့လေ..း)
အေးချမ်းမွန်မှ ( Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ ) တွင်ရေးသားသည့် သတင်းအချက် အလက်ကို မူရင်းအတိုင်း မျဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ ချစ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး...
စိတ်တွေဘယ်လောက်နှစ်ပြီးချစ်ထားလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပြီး
credit to PannYai Lay
သက်ပြင်းတခါချရင် ရုပ်ကျတယ် အသက်တိုတယ်ဆိုပြီး
ဘယ်သူမှ သက်ပြင်းမချ ချင်ပါဘူး
တခါတလေ လူတယောက် စိတ်ညစ်မှာစိုးလို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ငြင်းလိုက်ရတာမျိူး ရှိတယ်
ပြီးရင်တော့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ပြုံးမိလိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် အဲဒီ အပြုံးထဲမှာတော့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ရင်ထဲ ငိုကြွေးမှု တွေ ကိုတော့ ထွေးပိုက်ထားတတ်ကြတယ်
ရင်ထဲ အရမ်းပြည့်ကျပ်လွန်းလို့ မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး လေပူလေးတချက် အပြင်ကို ထုတ်လိုက်ကြတယ်
အမြဲတမ်းရင်ထဲ ဝမ်းနည်းနေတာထက်စာရင် အပြင်ကို သက်ပြင်းလေး တချက် ထုတ်လိုက်ရင် ရင်ထဲ ခဏတာတော့ သက်သာသွားတာအမှန်ဘဲ~~
( ဇင် နှင်း )
ဦးနှောက်နဲ့တွဲဖတ်ပါ စိတ်ထားကိုဖတ်ပါ ၊
အဲဒါမှ စိတ်သဘောထားကိုမကြိုက်လို့ ၊အကျင့်စာရိတ္တကိုမကြိုက်လို့ဆိုပြီး
လမ်းခွဲရခြင်း ရည်းစားတွေများရခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပါ
အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ ။
လ်ိင်အင်္ဂါကို စိတ်တိုင်းကျရလိုသူတွေအတွတ် ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအချို့တို့သည် လိင်အင်္ဂါသေးနေလို့ စိတ်ပျတ်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့သူငယ...
https://www.facebook.com/groups/1150014105080954/ အမျိုးသား အင်္ဂါအတွက် စိတ်ချယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သုံးစွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ မယုံနိုင်စရာ ရလဒ်...
အပိုင်း (၁) “အား .. .ကျွတ် . ကျွတ် … ” .. “နာလိုက်တာ .. ” … ညီးတွားသံ သဲ့သဲ့ဖြင့် ဆေးရုံကုတင်ထက်မှ မိန်းကလေး တစ်ယောက် သတိရလာသည်။ အနားမှာ ...
အိမ်ထောင်ရေး မသာယာတာ ဒီအချက်များကြောင့် ၁။ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက်က မပြင်ပေးနိုင်ဘူး လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရိ...
လိင်စိတ်ညှိုးနေရင် ဘာလုပ်မလဲ(18+အမျိုးသားများသာ) တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် ပျောက်ဆုံးနေတာဟာ တကယ်ကို ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ြ...
မိန်းမကို အလိုလိုက်နိူင်တဲ့ယောင်္ကျား ပျော်ရွှင်မှုကို ရသွားတယ် မိန်းမကို ပိုက်ဆံပေးသုံးနိူင်တဲ့ယောင်္ကျား ကြီးပွားချမ်းသာမှုကို ရသွားတယ် မိ...
စိတ်သွားတိုင်း လိုက်မစွမ်းနိုင်သော ယောက်ျားကောင်းများအတွက် MAN POWER အမျိုးသားစွမ်းအားဖြည့် ဈေးနုန်း ၁၃၀၀၀၀ ၁သိန်း၃သောင်း Made in U.S.A...
လူပျိုစစ်ခြင်း/မစစ်ခြင်း နှင့် အပျိုစစ်ခြင်း/မစစ်ခြင်း စကားချီး :::::: ၏အကြောင်းအရာကိုရေးသားရာတွင် ဆေးပညာနှင့်ဆိုင်သော အယူအဆများအပြင် က...
ဒီသတင်းလေးကတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ..၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဟိုးလေးတစ်ကျော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေပေါ့...၊ ခုချိန်ဆိုရင် သူတို့လည...
မင်္ဂလာပါ. Powered by Blogger.
- Copyright © အိမ်ထောင်ရေးသုခ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -